Ciiddamada Itoobiya oo Shaqaale UN-ta ah ku rasaaseeyay Gobolka Tigray | Berberanews.com
Home WARARKA Ciiddamada Itoobiya oo Shaqaale UN-ta ah ku rasaaseeyay Gobolka Tigray
Ciiddamada Itoobiya oo Shaqaale UN-ta ah ku rasaaseeyay Gobolka Tigray
Tigray-(Berberanews)Ciidamada Itoobiya ayaa rasaaseey oo xidhay shaqaalihii UN-ka kadib markii ay dhex mareen baraha kantaroolka ee waqooyiga gobolka colaadu ka taagan tahay, afhayeenka dowlada Redwan Hussein ayaa xaqiijiyay.
Kooxda UN-ka waxay iska indha tireen awaamiirta ah inaanay aaga joogin, ayuu raaciyay.
Ciidamada dowladdu waxay la dagaallamayaan kooxda xoreynta shacabka Tigray (TPLF) ee gobolka tan iyo 4tii Nofembar.
Kooxda Qaramada Midoobay ayaa lagu soo waramayaa inay isku dayayeen inay booqdaan xero ay ku jiraan qaxooti Eritrean ah maalintii Axada markii toogashada ay dhacday.
Waxaa jiray walaac badan oo ku saabsan halka ay ku dambayn doonaan qaxootiga kadib markii ay soo baxeen warar aan la hubin oo sheegaya in ciidamada Eritrea ay u gudbeen dhanka Tigray, qaarna ay dib ugu celiyeen Eritrea.
Labada dowladoodba waxay beeniyeen in ciidamada Eriteriya ay kusugan yihiin Tigray si ay gacan uga gaystaan ​​jabinta kooxda TPLF.
Qaramada Midoobay waxay ka codsatay dawlada Itoobiya inay siiso “marin bani’aadamnimo aan kala go ‘lahayn oo ay ku tagto Tigray iyadoo ay jirto walaac laga qabo cunno yari iyo dawooyin laga helo gobol ay ku nool yihiin dad ka badan sideed milyan.
Qaar ka mid ah shaqaalaha UN-ka ayaa runtii la xidhay qaarna waa la toogtay, ”Mr Redwan ayaa laga soo xigtay wakaaladda wararka ee AFP.
“Waxay jebiyeen laba bar kontorool si ay u gaadhaan meelihii ay ahayd inaysan tagin, iyo in loo sheegay inaanah aadin, markii ay doonayeen inay jabiyaan kan saddexaadna waa la toogtay waana la xidhay,” ayuu raaciyay.
UN-tu wali kamay hadal dhacdadan
oo ah hoggaamiyaha Jabhadda Xoreynta Dadka ee Tigray
Previous articleMadaxweynaha Turkiga oo beeniyay inuu wershad Milateri ka iibiyay Qadar
Next articleSomaliland imisa masuul baa u xidhan xattooyo xoolo dadweyne?